Mawjad kulul oo kuleyl ah oo ka jirta Australia ayaa dileysa fiidmeerta iyagoo hurda | Saadaasha Shabakadda
Mawjad kulul oo kuleyl ah oo ku dhaceysa Australia ayaa dileysa fiidmeerta inta ay hurdaan
Sawir - IGN.com
In kasta oo aan joogno Waqooyiga Hemisphere weli waxaan haysanaa wax yar oo aan ku dhammayn karno xilliga qaboobaha, Australia gudaheeda geedaha waxaa ka buuxsamaya fiidmeerro waaweyn oo dhintay. Sababta?
Mawjad kuleyl daran oo ka tagaysa heerkulka in ka badan 45 darajo Celsius koonfur-bari qaaradda, sida Singleton, oo aad ugu badan xayawaankan.
Fiidmeerta weyn ee Australiyaanka ah ama dawacada duuleysa waxay ka mid tahay qaybta hoose ee Megachiroptera, oo ka kooban noocyo fiidmeer ah oo dhererkoodu gaarayo 40cm, 150cm oo baalal ah oo culeyskoodu ka badan yahay kiilogaraam. Si loo badbaadiyo, Waxay quutaan miro ama ubax nectar, sidaa darteed had iyo jeer waxaa laga heli karaa geedaha ama agtooda, halkaas oo ay uga faa’iideystaan ​​fursad ay ku nastaan ​​oo ay qorraxda isaga difaacaan.
Si kastaba ha ahaatee, kuleylka sare ee maalmahan laga diiwaangelinayo Australia wuxuu halis gelinayaa noocyada horeyba loogu hanjabay ee fiidmeerta weyn ee Australia, oo dhinta isagoo hurda. Waxaa jira qaar halkaas ku haray, oo ka laadlaada laanta, qallafsanaan awgeed, mid kale ayaa dhulka ku dhacaya.
Xaaladdan ayaa noqotay mid aad loola yaabo sawirro iyo fiidiyowyo kaladuwan ayaa lagu galiyay shabakadaha bulshada. Masuuliyiintu waxay ku dadaalayaan inay ka saaraan meydadka xoolahan geedaha waxayna ka codsadeen deriska inaysan taaban, maadaama ay wataan cuduro lagu kala qaado dadka, sida raabiyada.
Haddii tani aysan ku filnayn, bariga dalka waxaa laga dareemayaa mid ka mid ah mowjadihii dabka ee ugu xumaa taariikhda dhow, oo qatar ku ah ubaxyada iyo xayawaanka Australia.
Fiiro gaar ah: Si aan loo dhaawicin xasaasiyadda akhristaha, waxaa loo doortay in aan lagu darin sawirrada fiidmeerta dhimatay. Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad daawato fiidiyoow, waad awoodi kartaa halkan guji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Mawjad kulul oo kuleyl ah oo ku dhaceysa Australia ayaa dileysa fiidmeerta inta ay hurdaan
Waxay umuuqataa in fiidmeerta Australiya ay la ildaran yihiin adkaanta kuleylka iyo isbedelka cimilada. Aadanaha, oo leh qaboojiye, wuxuu umuuqdaa inuusan rabin inuu ogaado xaqiiqada culeyska arrintaan. Sidaa darteed, tiro badan oo "beeniyayaal" ah oo isbeddelka cimilada ah ayaa maanta soo ifbaxay, kuwaas oo aan ku soo koobi karno noocyada soo socda:
1.- Isbadalka cimilada majiro.
2.- Is-beddelka Cimilada ayaa jira laakiin maahan mid bani'aadamku keeno.
3.- Isbedelka cimilada ayaa jira laakiin iyagu waxay ku dhalinayaan ayagoo ku maareynaya cimilada anteenooyinka Haarp (aragtida shirqoolka)
4.- Isbedelka Cimilada ayaa jira, waa mid aan dib looga noqon karin waxna ma qaban karno.
Noocyada noocan oo kale ah "diidmada" waxay la yimaadaan hal fikrad, taasoo ah "fadhiisasho" iyo sugid sida fiidmeerta Ustaraaliya oo ku baaba'aya laan oo aan samayn karin wax ay kula dagaallanto kuleylka.
Marka la eego dhammaan habdhaqan la'aantaas, waxaan leenahay fikir sax ah oo geesinimo leh, oo ku saleysan ficillada tallaabooyinka lala xiriirinayo xakamaynta qiiqa gaaska. Xiriirka ka dhexeeya gooladaha heerkulka kororka iyo xaddiga C02 la soo daayay maaddaama ay jiraan diiwaanno ayaa iska cad. Laakiin waqtigan xaadirka ah waxaa jira gees kale oo rajo leh oo nooceena ah iyo kuwo kale oo badan. Qaloocaani ma aha mid kale oo aan ahayn koritaanka tirada iyo hagaajinta waxqabadka tamarta la cusboonaysiin karo iyo gawaarida korantada. Haddii aan eegno qalooca horumarka ee ka dhacaya arrintan, u ekaanta ay la mid tahay kuwii hore, waxaan ogaaneynaa in nolosha maanta iyo badbaadada noocyadeena ay yihiin kuwa ugu weyn uguna wanaagsan "filin shaki leh." Uma maleynayo inaan u baahanahay inaan tago filimada, ama aan akhriyo buug, ama aan aado tiyaatarka. Xiisada sheekadan sheekadeedu aad bay iiga yaabisay.
Dadku waxay beddelaan cimilada 170 jeer ka dhakhso badan kuwa dabiiciga ah
Midowga Yurub oo ay weheliyaan Shiinaha ayaa hoggaamin doona heshiiska Paris